सार्वजनिक संस्थानको नाफामा ५६५ करोडले कमी
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वका संस्थानहरूको नाफामा उल्लेख्य कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सञ्चालनमा रहेका ३७ संस्थानको नाफा ५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नाफामा अघिल्लो पटकभन्दा करीब ५६ प्रतिशतले कमी आएको हो । सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७१ अनुसार आव २०६९/७० मा संस्थानहरूको नाफा रू ११ अर्ब ४० करोड थियो ।
नेपाल आयल निगमको मात्रै नोक्सान ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेपछि समग्रमा संस्थानहरूको नाफा घट्न गएको समीक्षामा उल्लेख छ । निगमको खुद नोक्सान भने रू. ८ अर्ब ३० करोड रहेको छ । ३७ संस्थानमध्ये आव २०७०/७१ मा १८ ओटा संस्थान नाफामा रहेका छन् भने १५ ओटा नोक्सानमा रहेका छन् । बाँकी रहेका संस्थानको भने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अघिल्लो आवमा भने जम्मा १९ संस्थान नाफामा र १७ ओटा नोक्सानमा थिए ।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा नेपाल टेलिकमले कमाएको छ । कम्पनीको नाफा रू. ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । प्रतिशतको आधारमा भने सबैभन्दा धेरै एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कको नाफा (१ सय ४७ प्रतिशत) बढेको छ । अन्य बैङ्कमा रहेको शेयर विक्रीबाट एनआईडीसीको आम्दानीमा वृद्धि भएको हो ।
अघिल्लो आवमा नाफामा रहेको दुग्ध विकास संस्थान गत आव २०७०/७१ मा भने नोक्सानमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । सो संस्थानको नोक्सानी समीक्षा अवधिमा रू १५ करोड ५८ लाख रहेको छ ।
आव २०७०/७१ मा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय रू २ खर्ब ५७ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १५ दशमलव ४८ प्रतिशत बढी हो । आव २०६९/७० मा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय रू २ खर्ब २३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । यसले सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलतामा सुधार आएको सङ्केत गरेको छ । समग्र अवस्थामा सुधार देखिए पनि प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांशको अवस्था सन्तोषजनक नभएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लेख छ ।
ऋण ७.५७ र शेयर लगानी ४.६८ प्रतिशतले वृद्धि
आव २०७०/७१ मा कुल ३७ सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल शेयर लगानी रू १ खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । सोही अवधिसम्ममा ऋण लगानी रू १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । आव २०६९/७० मा शेयर र ऋण लगानी क्रमशः रू १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड र १ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड थियो । यसरी शेयर लगानीमा ७ दशमलव ५७ र ऋण लगानीमा ४ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेको छ ।
आव २०७०/७१ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद सञ्चित नोक्सान रू २६ अर्ब ९२ करोड २७ लाख रहेको छ ।
सरकारबाट संस्थानहरूलाई आव २०६९/७० मा रू ६ अर्ब ९९ करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आव २०७०/७१ मा यो रकम घटेर रू ६ अर्ब ६१ करोडमा सीमित भएको छ । यो सरकारी शेयर लगानीको ५ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । यस अवधिमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, कृषि विकास बैङ्क, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारलाई लाभांश प्राप्त भएको छ ।